मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, को-को बन्दैछन मन्त्री ? — Imandarmedia.com
मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, को-को बन्दैछन मन्त्री ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । शनिबार बिहान देउवालाई भेट्न दाहाल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
भेटमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई थप बलियो र विश्वासको वातावरण बनाउँदै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
देउवालाई विश्वासको मत दिएका माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको नेकपा (एस) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को दर्ता प्रक्रिया पूरा भएकाले अब केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने देउवा निकट एक नेताले बताए ।
गएको २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिएका देउवाले एक सातामै संसदमा विश्वासको मत लिए । तर मन्त्रिपरिषद्मा विश्वासको मत दिने दल र सांसदहरुलाई समेट्ने चक्करमा देउवाले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
नवगठित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) ले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । ठाकुर नेतृत्वको लोसपा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लागेको छैन ।
उता नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको वाग्मती प्रदेश सरकार छिट्टै ढल्ने दाबी गरेका छन् ।
एकल बहुमत रहेको एमाले फुटेर नयाँ दल दर्ता भएसँगै शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको समयमा पाण्डेको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । सांसद पाण्डेले दल दर्ताको आधिकारिक पत्र प्रदेशसभामा आएसँगै शाक्यलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।
‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यो सरकार अल्पमतमा पर्छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । शाक्य नवगठित पार्टीमा आएको खण्डमा मुख्यमन्त्री मान्न सकिन्ने र एमालेमै रहेको खण्डमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत गरिने उनले बताए ।
उनले शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट प्रक्रियागत रुपमा हटाइने बताए । ‘हामीसँग प्रदेशसभाका २१ जना सदस्य छन् । अझै थप्ने कोसिस गरिरहेका छौं । यो सरकार ढल्छ । अष्टलक्ष्मीलाई बिदाइ गरिन्छ । हामी गठबन्धनमा रहेका तीनवटा पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछौं,’ उनले भने । उनले माओवादी र कांग्रेससँग छलफल गरेर कसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा जाने तय गरिने बताए । ‘नेतृत्व ठूलो विषय होइन । हामी गठबन्धनमा छौं । नेतृत्वको विषय सजिलै टुंगिन्छ,’ उनले थपे ।
१ सय ९ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा एमालेको सभामुखसहित ५६ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५५ सांसद चाहिन्छ । तर, आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरु नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुलिसकेका कारण शाक्यले अब सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।
वाग्मतीमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२ सांसद छन् । साना दलहरु नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।
सरकारमा सहभागी हुनेबारे प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो भने भनौँला : महन्थ ठाकुर
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका वेला नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारमा जाने विषयमा आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको बताए।
शुक्रबार बबरमहलस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पार्टी दर्ता नै भर्खर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे मात्रै सरकारमा जाने विषयमा आफूहरूले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि स्पष्ट पारे। ‘पार्टी दर्ता नै भर्खर भएको छ। त्यसपछि पनि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, अनि कुरा राख्छौँ। जाने–नजाने कुरा त मैले भनिसकेँ नि। हाम्रो पार्टी हामी कतिचोटि भेटिसकेका छौँ नि, सामूहिक रूपमा पनि भेटिराखेका छौँ। अलग–अलग पनि भेटेका छौँ। तर, कुनै पनि छलफलमा सरकारमा जाने विषयमा छलफल भएको थिएन। किनकि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने, स्थापना गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यसैले सरकारसँग यी कुराहरू पनि उठ्ला वा शेरबहादुरजीले सोध्नुहुन्छ भने हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ ।’
सत्तारुढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा तय गरिनसकेको उनको भनाइ छ। ‘हामी सत्तारुढ गठबन्धनमा छैनौँ । चुनाव घोषणा भएपछि त्यस विषयमा पनि विचार गरौँला,’ उनले भने।